​पिपल्सको कारवाही फुकुवा, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलसँग गाभिन स्वीकृति
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पिपल्स फाइनान्स लिमिटेड माथिको कारबाही फुकुवा गरेको छ । पिपल्स फाइनान्सलाई २०६८ भदौ २५ देखि राष्ट्र बैंकले शिघ्र सुधारात्मक कारवाही गर्दै आएको थियो । घरजग्गा क्षेत्रमा..
​पोखराको सिटी डेभलपमेन्ट बैंकको चैतसम्म १२ करोड ७२ लाख नाफा
काठमाडौं । ​पोखराको सिटी डेभलपमेण्ट बैंकले चालु आर्थिक बर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म १२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ सञ्चालन मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले चार अर्ब ४८ करोड निक्षेप संकलन र तीन अर्ब..
​कैलाश विकास बैङ्कद्धारा रेडक्रसलाई बेड हस्तान्तरण
बुटवल । कैलाश विकास बैङ्कको बुटवल शाखाले आफ्नो शाखा स्थापनाको चौथो बर्ष पूरा गरेको अवसरमा समाजिक उतरदायित्व अन्र्तगत नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, रक्तसञ्चार सेवा केन्द्र बुटवललाई बेड हस्तान्तरण गरेको छ । विहीवार..
​अमेरिकी डलरको भाउ घट्यो
काठमाडौं । बिहीबार अमेरिकी डलरको भाउ घटेको छ । मंगलबार र बुधबारको तुलनामा बिहीबार एक डलरमा २१ पैसाले घटेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि एक डलर ९९ रुपैयाँ ४९..
​राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको साधारणसभा
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । बैंकका सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा रेवतवहादुर कार्कीको सभापतित्वमा केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पन्न साधारण सभाले वार्षिक प्रतिवेदन संशोधनसहित पारित गरेको छ। साधारणसभामा बैंकका..
​सानिमा बैंकको भिसा डलर डेबिट कार्ड र भिसा डलर ट्राभल कार्ड जारी
काठमाडौं । सानिमा बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रयोग गर्न सकिने भिसा डलर डेबिट कार्ड र भिसा डलर ट्राभल कार्ड सञ्चालनमा ल्याएको छ । भिसा कार्ड स्वीकृत गर्ने विश्वका जुनसुकै एटिएमबाट नगद झिक्न..
​सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले भिसा डेबिट कार्ड र ट्राभल कार्ड सेवा
काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले भिसा डेबिट कार्ड र ट्राभल कार्ड सेवा शुरु गरेको छ । विदेश यात्रा गर्ने ग्राहकहरुको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै बैंकले यस्तो सेवा शुरु गरेको हो । बैशाख..
​एमआइसिआर चेक साउनबाट मात्र पूर्ण कार्यान्वयनमा
काठमाडौं | एमआइसिआर चेक साउनदेखि मात्र पूर्ण कार्यान्वयमा आउने भएको छ । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त चेक प्रयोगमा ल्याउन नसक्ने भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले साउनदेखि मात्रै पूर्ण कार्यान्वयमा..
​कृषि बिकास बैंकको सात प्रतिशत बोनससहित १६ प्रतिशत लाभांश, साधारण सभा बैशाख २६ गते
काठमाडौं । सरकारको धेरै स्वामित्व भएको कृषि बिकास बैंकको साधारणसभाको मिति बल्ल तोकिएको छ । आगामी बैसाख २६ गते बैंकको आठौं साधारणसभा हुने गरी संचालक समितिको बैठकले मिति तोकेको हो । साधारणसभामा शेयरधनीलाई..
​सनराइज बैंकको सातौं बार्षिक साधारणसभा बैशाख २३ गते, सय बराबर १५ हकप्रद सेयर
काठमाडौं । सनराइज बैंकले सातौं बार्षिक साधारणसभा बैशाख २३ गते गर्न लागेको हो । बैंकले साधारणसभामा पुँजी बृद्धिको प्रस्ताव लैजाने भएको छ । बैंकले एक सय कित्ता बराबर १५ कित्ता..
​एलाइन्स इन्स्योरेन्स विहीबारबाट प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनीको नामबाट कारोबार शुरु
काठमाडौं । एलाइन्स इन्स्योरेन्सले विहीबारबाट प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनीको नाममा कारोबार गर्ने भएको छ । तत्कालीन एलाइन्स इन्स्योरेन्सको सेयर प्रभु समूहले किनेपछि कम्पनीको नाम परिवर्तन भएको हो । प्रभुलाई नयाँ नामबाट कारोबार..
​आईएमइले ल्यायो नयाँ बर्ष अफर ‘खुशीका तीन दिन’
काठमाडौं । नयाँ वर्ष २०७२ को पावन उपलक्ष्यमा नेपालकै नम्बर एक मनी ट्रान्सफर कम्पनी आईएमईले ‘खुशीका तीन दिन’ नामक सेवाग्राहीमूखि प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम ल्याएको छ । चैत्र ३० देखि ०२ वैशाख २०७२..
विश्व विकास बैंकको १६.५० प्रतिशत बोनस पारित, तीन संचालक निर्वाचित
काठमाडौं । विश्व विकास बैंकको सातौं वार्षिक साधारणसभाले प्रस्तावित १६.५० प्रतिशत बोनस सेयर पारित गरेको छ । मंगलबार पोखरामा सम्पन्न साधारण सभाले कर प्रयोजनका लागि ०।८७ प्रतिशत नगद लाभांशको प्रस्तावसमेत..
​जनता बैंकबाट डा रमेशकुमार भट्टराईको राजीनामा
काठमाडौं । जनता बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) डा रमेश कुमार भट्टराईले राजीनामा दिएका छन् । भट्टराईले करिब डेढ वर्ष जनता बैंकको सिइओ भएर काम गरे । बैंक सञ्चालक समितिले..
अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा ग्लोवल आईएमई बैंकको सम्पर्क कार्यालय, भारतमा चाँडै खोलिने
काठमाडौं । ग्लोवल आईएमई बैकले अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा सम्पर्क कार्यालयको स्थापना गरेको छ । उक्त सम्पर्क कार्यलयको उदघाटन अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले गरे । सो अवसरमा महतले नेपाली डायस्पोराले नेपालीलाई विश्मै गौरव..
​आईडी बैंकले लगानीकर्तालार्इ १० प्रतिशत नगद लाभांश र १० प्रतिशत बोनस दिने प्रस्तव पारित
काठमाडौं । इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट बैङ्कले आफ्ना सेयरधनीलाई २० प्रतिशन लाभांस दिने भएको छ । बैंकको बुधबार सम्पन्न पाँचौ वार्षिक साधारणसभाले सेयरधनीलाई लाभांश दिने सञ्चालक समितिको प्रस्ताव पारित गरेको हो ।..
मेगा बैंकको ६५ दिने र १२० दिने मुद्दति निक्षेप योजना
काठमाडौं । मेगा बैंकले साढे ६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने गरी दुई वटा मुद्दति योजना ल्याएको छ । बैंकले ६५ दिने र १२० दिने दुई वटा मुद्दति योजना ल्याएको हो । ६५..
​कुमारी बैंकले १४औं वाषिर्कउत्सवको अवसरमा ल्यायो सय दिने आकर्षक मुद्दति योजना
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेडले १४औं वाषिर्कउत्सवको अवसरमा आकर्षक मुद्दति निक्षोपमा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । सय दिने उक्त मुद्दति खातामा ६.५० प्रतिशत व्याजदर दिने बैंकले जनाएको छ । न्यूनतम् १..
​रिलायन्स लोटस फाइनान्सको शाखा पोखरामा
पोखरा । रिलायन्स लोटस फाइनान्सले पर्यटकीय नगरी पोखरामा शाखा बिस्तार गरेको छ । शाखाको पाइनान्सका अध्यक्ष कुशप्रसाद मल्लीकले उद्घाटन गरे । यो सँगै फाइनान्सका शाखा संख्या चार पुगेका छन् । राजधानीको..
स्टान्डर्ड चार्टड बैंकको तिलगङ्गा आँखा अस्पताललाई ५५ लाख सहयोग
काठमाडौं । स्टान्डर्ड चार्टड बैंकले ग्रामिण तथा अर्धशहरी क्षेत्रमा आँखाको शल्यक्रिया सञ्चालन गर्नका लागि तिलगङ्गा आँखा अस्पताललाई ५५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । बैंकको सहयोगबाट अस्पतालले दुई स्थायी आँखा केन्द्र..
प्रभु बैंक बन्यो सीडीएससीको निक्षेप सदस्य
काठमाडौं । प्रभु बैंक र सीडीएस एण्ड क्लियरिङ कम्पनीबीच निक्षेप सदस्यता सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा प्रभुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन र सीडीएसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुबोध शर्मा सिग्देलल..
​सहारा विकास बैंकले १८ प्रतिशत वोनस सेयर दिने
काठमाडौं । साहारा विकास बैंकले वोनस सेयरसँगै हकप्रद सेयर पनि दिने भएको छ । बैंकले गत बर्षको नाफाबाट १८ प्रतिशत वोनस सेयर दिने निर्णय गरेको हो । बैंकले कर प्रयोजनका लागि..
​रिलायबलको सुभ-लाभ मुद्दती खातामा ८ प्रतिशत ब्याज
काठमाडौं । रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकले सुभलाभ एक वर्षे मुद्दती खातामा वाषिर्क ८ प्रतिशत ब्याज दिने भएको छ । बचतकर्ताले १० हजार रुपैयाँमा मुद्दती खाता खोल्न सक्नेछन् । हरेक व्यक्तिको खातामा दुई..
​ सनराइज बैंकको ५२औं शाखा सिराहामा
काठमाडौं । सनराइज बैंकले सिराहाको लाहान बजारमा आफ्नो शाखा विस्तार गरेको छ । शाखाको बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य बच्छराज तातेडले उद्घाटन गरे । सिराहा शाखासँगै बैंकका शाखा संख्या ५२ पुगेका छन्..
​नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्था घटुवा गर्न नपाउने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था घटुवा (स्तर तल झार्न) गर्न नपाउने भएको छ । ‘बैक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन ९बाफिया० २०७१’ कोे मस्यौदामा राष्ट्र बैंकले..
​बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गिकरण हटाइने, अब सबैले ‘बैंक’ लेख्न पाउने
काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गिकरण हटाउने भएको छ । हाल ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा विभाजन गरिएको वर्गिकरणलाई हटाएर एउटै वर्ग कायम गर्न लागिएको हो । अर्थमन्त्रीको..
​रेमिट्यान्स व्यवसायी र गभर्नर नेपालबीच भेटवार्ता
काठमाडौं । नेपाल विप्रेषण संघले राष्ट्र बैंकका नवनियूक्त गभर्नर डा। चिरञ्जिवी नेपालसँग भेटवार्ता गरेको छ । मंगलबार संघका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचन नेतृत्वमा गएको टोलीले गभर्नर डा। नेपाललाई बधाई तथा सुभकामना दिँदै..
​प्रभु बैंकले सुरु गर्‍यो ‘प्रिभिलेज बैंकिङ’ सेवा
काठमाडौं । प्रभु बैंकले प्रिभिलेज बैंकिङ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस सेवाअन्तर्गत निश्चित मापदण्ड पुरा गरेका ग्राहकहरुलाई प्रिभिलेज कार्ड जारी गर्ने व्यवस्था गरेको बैंकले जनाएको छ । प्रिभिलेज कार्ड लिने..
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. चिरञ्जीवी नेपाल नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. चिरञ्जीवी नेपाल नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा विहीबार अपरान्ह बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले डा. नेपाललाई गर्भनर बनाउने निर्णय गरेको हो । गभर्नर छान्नका..
​एभरेष्ट बैंकले सरकारी विद्यालयलाई कम्प्युटर दियो
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सोमबार सर्लाहीे ग्रामिण इलाकामा रहेको रामसखी मोहित सिहं जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयलाई कम्प्युटरहरु सहयोग गरेको छ । मुख्य कार्यालय भवनमा भएको एक कार्यक्रममा..
Results 1896: You are at page 59 of 64